Pakistàna : Nibaboka ilay mpamono olona misesisesy fa nampiasa ny tambajotra sôsialy hamandrihana ireo pelaka hovonoiny · Global Voices teny Malagasy
Tsy vonona ho amin'io adihevitra io i Pakistàna
Nandika (fr) i Magali Tra
Voadika ny 03 Desambra 2020 2:37 GMT
Pikantsary avy amin'ny tatitra fanadihadian'ny Samaa TV. 26 Aprily 2013, nandritra ny antsafa iray nifanaovany tamin'ny Sama TV, niaiky fa namono lehilahy 3 pelaka ny lehilahy iray 28 taona.
Lahatsoratra anglisy niandohana, nivoaka tamin'ny 3 May 2014
Raha tsy asiana fanamarihana manokana dia mankany amina tranonkala amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra ato.
Tsy nahavita nampitony ny ahiahin'ireo vondrompiarahamonina LGBT ao Pakistàna ny nisamborana tamin'ny faran'ny Aprily 2014 an'ilay mpanao vonjy aina, 28 taona, niteraka roa: nampangaina ho namoky zavamahadomelina ary avy eo namono pelaka telo tao Lahore ity lehilahy ity, rehefa avy nifandray tamin'izy ireo tao amin'ny tambajotra sôsialy.
Taorian'ny nisamborana azy, niaiky ho nanao ireo heloka bevava ireo ilay lehilahy mba hiampangàna ny fiparitahan'ny fametavetàna zaza sy ireo firaisana ara-nofo ifanaovan'ny olona mitovy taovampananahana. Atahoran'ireo mpikatroka sasany ny hitehafana azy ho toy ny maherifo « mpankahala-LGBT ».
Sarotra be izany hoe ho pelaka izany ao Pakistàna. Mifanohitra amin'ny lalàna [fr] ny fahapelahana ao, ary na ohatra aza ny fanjakàna ka tsy mikendry mibaribary ireo pelaka sy zara raha manameloka azy ireny amina sazy mavesatra voarakitra ao anatin'ny lalàna, tsy dia leferina loatra ireo pelaka sahy miseho masoandro.
Ao anatin'io firenena io izay miozolmàna ny ankamaroan'ny mponina, voahilikilika ara-tsôsialy ireo pelaka, lahy sy vavy, ary miatrika ny tsy fankatoavana sy ny fanavakavahana any anaty toedraharaha maro isankarazany any. Misy mitazona ny maha-izy azy ny sasany amin'ireo mpikambana ao anatin'ny vondrompiarahamonina LGBT ary miady ny mba hanekena ny zon'izy ireo ao Pakistàna. Saingy marobe ireo lehilahy misafidy ny hiaina miafina : mitady vehivavy, sy zanaka ry zareo, ary ny fanajàna ara-piarahamonina [mifamatotra amin'io sata ara-panambadiana io], nefa etsy andaniny dia, somary miafinafina, manao ilay fomba fanaony pelaka eny ihany tsindraindray.
Nolalovan'ilay voalaza ho mpamono olona ny tao amin'ny Manjam, ilay milaza azy ho « tambajotra sôsialin'ny pelaka », mba hifandraisany amin'ireo hovonoiny. Izany no fibabohana nataony nandritra ny antsafa iray naharitra 20 minitra [ur] nataony ho an'ny Samaa TV, ilay mpampahalala vaovao ety anaty aterineto amin'ny fiteny ourdou , avy any am-ponja nitazonana azy. Avy eo ny Samaa TV dia norarafan'ny fantsy avy amin'ireo mpikatroka ety anaty tambajotra, izay miampanga azy ho nanome sehatra an'ilay voalaza ho mpamono olona. Voarara ao Pakistàna izao ilay tranonkala ary nanambara fa mety tsy hisokatra amin'ireo tsy mpikambana ao Pakistàna mandra-pisian'ny fepetra vaovao indray.
Nandritra ilay antsafa, niaiky ny vono nataony ilay lehilahy. Notantarainy ihany koa fa efa nisy namandrika izy ary nisy mpianatra be taona noho izy nanolana azy fony izy mbola tany amin'ny kilasy CM2 [kilasy fahadimy amin'ny ambaratonga fototra]. Nohamafisiny fa notateriny tamin'ny polisy sy ny tao an-tsekoly ny zava-nitranga, saingy tsy voahelingelina mihitsy ilay nanolana azy satria avy amina fianakaviana matanjaka.
Ato ny sombiny avy tamin'ilay antsafa [ur] voadika avy amin'ny fiteny ourdou :
« Ananako tsara ny antony : ny ratsy miparitaka eny anivon'ny fiarahamonintsika noho ireo olona manome lamosina miala amin'ny làla-mahitsy ary manimba ny fiainan'ny hafa. Tsy noho ny filàna no maha-pelaka azy ireny. Fialamboly ho azy ireo ny fanaovana firaisana samy pelaka. Toy ny hoe manao fanatanjahantena no fandraisan-dry zareo azy io. » [04:13-31]
Ny mpanadihady : « Tsy nanenina ve ianao hoe namono olombelona iray? »
Ny voampanga: « Tsia, nanadio ny fako aho […] Saingy malahelo aho ho an'ireo olona akaiky an-dry zareo […] Tsy ny tsara ilay fomba nataoko […] » [08:00-45]
« Miteraka tsy rariny marobe eny anivon'ny fiarahamonintsika ny fahapelahana. Misy olona iray manao azy io amina iray hafa, manazatra azy amin'izany, ary ity farany dia manery [amin'ny toerany indray avy eo] olona iray hafa hiaraka hanao toy izany aminy. » [13:35-49]
« Tsy mihevitra an'ireny olona ireny ho fako aho. Fa ny fahazaran-dry zareo dia izay mihitsy […]. » [14:45-54]
Ho setrin'ity fibabohana tao amin'ny Samaa TV ity, ilay Pakistaney mpiaro ny zon'ny LGBT, Hadi Hossain, dia namoaka taratasy misokatra iray tao amin'ny Scroll.in, ka ao anatin'izany no anamafisany fa novakian'ilay raharaha, tamin'ny fomba tsy nampoizina, ny fahanginan'i Pakistàna manoloana ny fahapelahana :
Te-hamaly zavatra vitsivitsy voalazanao tao anatin'io fandaharana io aho. Manandanja be izany amiko satria isan'ireo «kachras» (fako) aho, teny nampiasainao hanondroana ireo pelaka.
Nino ianao fa hiteraka tahotra fahafatesana tao anatinay ny hetsika nataonao. Tamin'ny voalohany dia nisavoritaka ireo mpikambana ao anatin'ny vondrompiarahamoninay. Nisy vondrona sasantsasny sy karajia an-tserasera nofoanana. Saingy tsy isalasalàna fa adinonao ny fikirizana tsy misy tomika lalimpàka ao anatinay efa hatrany amin'ny fahazazàna. Nozakainay ny setrasetra, ny fanaovana tsinontsinona, ny daka, ny esoeso, ny tositosika, ny fihomehezana, ny fanasaziana, ny fanolànana. Nandritra ny androm-piainanay, niteny taminay ireo mafana fo tafahoatra mpandàla ity fiarahamonina miaina ny fenitry ny fifanambadian'ny lahy sy vavy ity hoe tokony hiova izahay, raha tsy izany dia hiaina anaty henatry ny maha-izahay anay hatrizay, hiaina anaty tahotra tsy mitsahatra sao ho tratra ary hahatsapa tena mandrakariva ho meloka amin'ny ataonay. Mbola mampivarahontsana lavitra noho izay fahafatesana raha ny efa natrehanay.
Bilaogera iray tsy nitonona anarana tao amin'ny Pious Sluts no niampanga ny Samaa TV tamin'ny nanandratana ilay mpamono olona ho amin'ny toeran'ny maherifo ara-pinoana tao amin'ny fandaharana nalefan-dry zareo :
Dia tena tsy tao an-tsainareo mihitsy ve hoe toy ny biby anie ity lehilahy nahavita namono lehilahy telo hafa ity ? Inona no ratsy indrindra miohatra amin'ny zavamisy hoe nasandratrareo ho maherifo ny olona iray mpankamamy filalaovana faty ? Ouah ! Tokony hiarahaba anareo angamba aho satria vitanareo ny nanjera ny hadisoana ho any amin'ireo niharam-boina. Moa tsy izany ve no nampianarin'ity fiarahamonina ity anareo ? Tsy misy hafa amin'ireo mpitondra antsika eto amin'ny firenena sy ireo olobe islamista mitaky hoe mila mitondra lehilahy efatra ny vehivavy iray voaolana mba hataony vavolombelona nahita maso, raha tsy izay dia akombony ny vava na matesa any!
Matetika mampanontany tena ny anjara toeran'ireo media pakistaney amin'ny adihevitra momba ny zon'ireo olona pelaka. Tonga tao amin'ireto olondroa miara-miaina ny mpanangom-baovaon'ny fantsona iray, ary niampanga ilay lehilahy ho nanao firaisana samy pelaka, dia nametraka izany tany amin'ny pôlisy no sady nitaky ny hanamafisana ho henjana ny lalàna manenjika ny fahapelahana. Fa nandritra ny antsafa nifanaovany tamin'ilay voalaza ho mpamono olona, ilay mpitatitra vaovao tao amin'ny Samaa TV kosa, tsy nitsara mihitsy (na namoaka hevitra) momba ny maha-pelaka.
Tao amin'ny Twitter, tsikaritr'ilay mpanatontosa, Sana Haq, ny fiantraikan'ilay raharaha:
Tsy vonona ho amin'io adihevitra io i Pakistàna, saingy mitambesatra amintsika eto ilay izy, amin'ny endrika lehilahy pelaka telo maty.
Ireo fitanisàna avy amin'ny fiteny ourdou dia nadika avy amin'ny dika teny anglisy nataon'i Sahar Habib Ghazi.